Zvakakosha here kunwa zvinwiwa zvemitambo kana uchichovha bhasikoro? | ebike Shuangye
musha Blog Electric bike knowledge Zvakakosha here kunwa zvinwiwa zvemitambo kana uchichovha bhasikoro?
Zvakakosha here kunwa zvinwiwa zvemitambo kana uchichovha bhasikoro?
Zuva ： 2021-07-21 Zvikamu:Electric bike knowledge Views: 1,556 maonero
Kana kurovedza muviri kukwirira uye kudziya kwemamiriro ekunze kukwirira, muviri uchadikitira zvakanyanya uye kupora kwema electrolyte mumuviri hakuzokwanise kuwana mwero wekurasikirwa, zvichikonzera kudzikira kwehusungwa hwemagetsi e muviri. Iwo makuru mabasa ema electrolyte mumuviri ndeaya: "kudzora kwemvura", "kugadziriswa kweiyo osmotic kumanikidza", "nerve conduction" uye "mhasuru contraction", chimwe nechimwe chazvo chinokanganisa mashandiro emitambo uye ayo mutasvi wese anofanirwa kutarisisa .
Chekutanga pane zvese, ngatitarise pamisanganiswa yezvinwiwa zvemitambo. Zvinwiwa zvemitambo zvinonyanya kuwedzera ma electrolyte senge potasium, sodium, calcium uye magnesium, ayo akafanana chaizvo nemvura yemumuviri wemunhu uye anogona kukurumidza kuzadza maratidziro anodyiwa nemuviri nekuda kwekurovedza muviri uye kugadzirisa mwero weacid-base mumuviri.
Usanwa zvinwiwa zvemitambo zvakawandisa panguva imwe chete, nekuti zvinwiwa zvemitambo zvakapfuma mumagetsi akawanda, uye kunwa zvakawandisa panguva imwe chete kuchawedzera mutoro paitsvo.
Prev: Iwo mabhenefiti ekuisa iyo nhare inobata
Next: Nguva yechando kutasva, iwe unofanirwa kuziva zvinoonekwa
Kuchovha bhasikoro kunokupa iwe zvidya zvihombe? Kudzoreredza mushure mekuchovha bhasikoro kwakakosha.
Bhasikoro ndiyo nzira huru inoenda kuhutano?